Esports Award 2019 မှာ ဘယျသူတှကေ ဘာဆုတှရေရှိသှားကွလဲ? – Gaming Noodle
2017 ကတညျးက စတငျခဲ့တဲ့ Esports နှငျ့ သကျဆိုငျသော ပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ အသငျးအဖှဲ့တှကေို ပေးအပျတဲ့ Esports Award ရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဆုပေးပှဲကိုတော့ နိုဝငျဘာ ၁၆ မှာ ကငျြးပခဲ့ပါတယျ။ USA. Atlanta မှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ Esports Award 2019 မှာတော့ ဆုပေါငျး ၂၇ ဆုပေးအပျခဲ့ပွီး ဆုရရှိသှားသူအခြို့ကို အောကျမှာ ဖျောပွပေးထားပါတယျ။
မဲပေးတဲ့စနဈကတော့ ပထမအဆငျ့အနဇေကာတငျစာရငျးမှာ ပါဝငျဖို့ အဆိုပွုရပါတယျ။ ဆုတှကေိုတော့ Community, Industry နဲ့ Pro ဆိုပွီး ၃ ဆုခှဲခွားထားပါတယျ။ ဒုတိယအဆငျ့မှာတော့ နောကျဆုံး ဇကာတငျစာရငျးကို ထုတျပွနျပါတယျ။ အဆိုပါဇကာတငျစာရငျးဝငျတှကေိုတော့ ၂၀၁၈ အောကျတိုဘာကနေ ၂၀၁၉ အောကျတိုတာလအထိ ၁၂ တာအတှငျး စှမျးဆောငျရညျတှကေို သုံးသပျရှေးခယျြခဲ့ကွတာပါ။ တတိယအဆငျ့မှာတော့ Public vote အနနေဲ့ အမြားပွညျသူမြား ကို မဲပေးရှေးခယျြစပေါတယျ။ စတုတ်ထအဆငျ့အနနေဲ့ Panel Vote မှာတော့ ပါဝငျမယျ့ Panel က အရာရှိတှနေဲ့ ဒိုငျတှကေ မဲပေးရှေးခယျြပါတယျ။ နောကျဆုံးအဆငျ့အနနေဲ့တော့ နိုဝငျဘာလမှာ ပှဲလုပျပွီး အနိုငျရရှိသူတှကေို ကွညောပေးတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
2. Esports Team of the Year
3. Esports PC Player of the Year
Kyle “Bugha” Giersdorf (Fortnite)- 1st place
Luka “Perkz” Perković (LOL) – 2nd place
Oleksandr “s1mple” Kostyliev (CSGO) – 3rd place
4. Esports Console Player of the Year
Dominique “SonicFox” McLean (Fight Games) – 1st place
7. Cosplayer of the Year
8. Esports Publisher of the Year
9. Esports play of the Year
S3xycake (Rainbow Six Seige) – 1st place
Squishy (Rocket League) – 2nd place
Caps (LOL) – 3rd place
10. Esports Caster of the Year
11. Esports Commercial Partner of the Year
12. Panel’s Choice Award of the Year
Ryan Thompson (Technical Production Director at Activision Blizzard)
13. Esports Console Rookie of the Year
14. Esports PC Rookie of the Year
Kyle “Bugha” Giersdorf (Fortnite) – 1st place
Mathieu “ZywOo” Herbaut (CSGO) – 2nd place
Emil “Nyhrox” Bergquist Pedersen (Fortnite)- 3rd place
15. Esports Hardware Provider of the Year
16 Esports Coach of the Year
Danny “zonic” Sørensen (Astralis CSGO)- 1st place
Kim “kkOma” Jeong-gyun (SK T1 LOL) – 2nd place
James Crowder (FaZe Call of Duty) – 3rd place
17. Esports Personality of the Year
18. Esports Coverage Website of the Year
19. Content Creator of the Year
20. Esports Host of the Year
Esports Award 2019 မှာ ဘယ်သူတွေက ဘာဆုတွေရရှိသွားကြလဲ?
2017 ကတည်းက စတင်ခဲ့တဲ့ Esports နှင့် သက်ဆိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အသင်းအဖွဲ့တွေကို ပေးအပ်တဲ့ Esports Award ရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဆုပေးပွဲကိုတော့ နိုဝင်ဘာ ၁၆ မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ USA. Atlanta မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Esports Award 2019 မှာတော့ ဆုပေါင်း ၂၇ ဆုပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဆုရရှိသွားသူအချို့ကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
မဲပေးတဲ့စနစ်ကတော့ ပထမအဆင့်အနေဇကာတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်ဖို့ အဆိုပြုရပါတယ်။ ဆုတွေကိုတော့ Community, Industry နဲ့ Pro ဆိုပြီး ၃ ဆုခွဲခြားထားပါတယ်။ ဒုတိယအဆင့်မှာတော့ နောက်ဆုံး ဇကာတင်စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အဆိုပါဇကာတင်စာရင်းဝင်တွေကိုတော့ ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာကနေ ၂၀၁၉ အောက်တိုတာလအထိ ၁၂ တာအတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို သုံးသပ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါ။ တတိယအဆင့်မှာတော့ Public vote အနေနဲ့ အများပြည်သူများ ကို မဲပေးရွေးချယ်စေပါတယ်။ စတုတ္ထအဆင့်အနေနဲ့ Panel Vote မှာတော့ ပါဝင်မယ့် Panel က အရာရှိတွေနဲ့ ဒိုင်တွေက မဲပေးရွေးချယ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့တော့ နိုဝင်ဘာလမှာ ပွဲလုပ်ပြီး အနိုင်ရရှိသူတွေကို ကြေညာပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။